आज पैसा नउठे भोली हुदैन राधिकाको अप्रेसन – Complete Nepali News Portal
आज पैसा नउठे भोली हुदैन राधिकाको अप्रेसन
कठै ! दैव पनि कति निष्ठुरी ! खाउखाउ लाउलाउ भन्ने उमेरमा छारेरोगले सतायो राधिका राईलाई। उनलाई पनि अरु साथी सरह पढ्न मन थियो होला, साथी भाईसँग खेल्न मन थियो होला, तर उनको रोगको कारणले गर्दा उनले बाल्यकालको त्यो रहर अनि सुखद पललाई समेत मन भित्रै मार्नु पर्यो उनले ।
अहिले उनी २४ वर्ष कि भइन्। बाल्यकाल देखि लागेको यो रोगले उनलाई अहिले सम्म सताइरहेको छ। छारेरोगले उनको साथ स्वासले झैँ आजको दिन सम्म पनि छोडेको छैन।